Nahoana i Jesosy no Nijaly sy Maty?
Ny Tilikambo Fiambenana | No. 2 2016
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Saramaccan Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
“Tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray [Adama] ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana.”—Romanina 5:12
Inona no hoteneninao raha hanontaniana ianao hoe: “Te hiaina mandrakizay ve ianao?” Betsaka no mety hilaza hoe: “Ie!” Mety hilaza koa anefa izy ireo hoe tsy hisy mihitsy izany. Mieritreritra mantsy izy ireo fa lalam-piainana ilay hoe tsy maintsy ho faty.
Ahoana indray raha havadika kely ilay fanontaniana, dia atao hoe: “Vonona ny ho faty ve ianao?” Azo antoka fa hamaly ny ankamaroantsika hoe tsia. Hita amin’izany fa te ho velona isika rehetra, na dia mafy aza ny fiainana. Milaza mantsy ny Baiboly fa efa voajanahary amin’ny olona mihitsy ilay hoe te ho velona foana. Izao no voalaza ao: ‘Ny fotoana tsy voafetra dia nataony tao am-pon’ny olombelona.’—Mpitoriteny 3:11.
Tsy mety velona mandrakizay anefa ny olona. Fa inona no nitranga? Efa nisy zavatra nataon’Andriamanitra ve mba hanavotana antsika? Mamaly an’ireo fanontaniana ireo ny Baiboly, ary manome fanantenana antsika ilay izy. Misy ifandraisany amin’ny nahafatesan’i Jesosy koa ny zavatra lazainy.
Milaza ny toko telo voalohany ao amin’ny Genesisy, boky ao amin’ny Baiboly, fa nampanantena an’i Adama sy Eva Andriamanitra hoe afaka ny hiaina mandrakizay izy ireo. Noresahiny tamin’izy ireo koa izay tokony hataon’izy ireo mba hahazoana an’izany. Tantaraina ao avy eo fa tsy nankatò an’Andriamanitra izy mivady, ka lasa tsy afaka niaina mandrakizay. Tsotra kely ilay fitantarana, ka misy milaza fa angano ilay izy. Mitovy amin’ny Filazantsara ihany anefa ny Genesisy, satria hita hoe azo antoka sy marina ny zavatra voalaza ao. *
Inona no vokany rehefa tsy nankatò i Adama? Hoy ny Romanina 5:12: “Tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray [Adama] ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka niely tamin’ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra.” Nanota i Adama rehefa tsy nankatò an’Andriamanitra, ka tsy afaka ny hiaina mandrakizay. Maty izy tamin’ny farany. Nandova ota koa isika satria taranany. Izany no mahatonga antsika harary sy hihantitra ary ho faty. Mifanaraka amin’ny zavatra hitan’ny mpahay siansa izany. Hitan’izy ireo hoe mifindra amin’ny zanaka ny toetoetra sasany avy amin’ny ray aman-dreny. Efa nisy zavatra nataon’Andriamanitra ve anefa mba hanavotana antsika?
INONA NO NATAON’ANDRIAMANITRA?
Nanota i Adama ka lasa tsy afaka ny hiaina mandrakizay koa isika taranany. Nisy zavatra nataon’Andriamanitra anefa mba hanavotana antsika. Inona izany?
Hoy ny Romanina 6:23: “Fahafatesana no tambin’ny ota.” Midika izany fa tsy maintsy maty izay manota. Nanota i Adama dia maty. Mpanota koa isika ka tokony ho faty, satria izay no tambin’ny ota. Tsy avy amintsika anefa no nahatonga antsika hoe vao teraka tonga dia mpanota. Naniraka an’i Jesosy Zanany àry Andriamanitra mba hanafaka antsika amin’ny ota sy ny fahafatesana. Nahoana i Jesosy no afaka nanao an’izany?
Maty ho antsika i Jesosy ka afaka ny ho sambatra sy hiaina mandrakizay isika
Lavorary i Adama tamin’ny voalohany, saingy tsy nankatò ka nahatonga antsika ho faty. Tsy nahavita nanavotra antsika àry raha tsy olona lavorary sy nankatò hatramin’ny fahafatesana. Hoy ny Romanina 5:19: “Tahaka ny nahatongavan’ny maro ho mpanota noho ny tsy nankatoavan’ny olona iray, no hahatongavan’ny maro ho marina noho ny nankatoavan’ny olona iray.” I Jesosy ilay hoe “olona iray.” Nanketỳ an-tany izy, lasa olona lavorary, * ary maty ho antsika. Afaka ny hahazo sitraka amin’Andriamanitra indray àry isika, ka lasa afaka manantena ny hiaina mandrakizay.
NAHOANA I JESOSY NO TSY MAINTSY NIJALY SY MATY?
Nahoana anefa i Jesosy no tsy maintsy maty mba hanavotana antsika? Fa angaha moa tsy azon’Andriamanitra natao ny niteny fotsiny hoe afaka ny hiaina mandrakizay ny taranak’i Adama rehetra? Manana fahefana hanao an’izany tokoa izy, satria izy no Mahery Indrindra. Raha nanao an’izany anefa izy, dia lasa tsy nanaja an’ilay teniny hoe ny fahafatesana no tambin’ny ota. Tsy hoe tsy misy dikany mantsy izany lalàna izany ka azo ovana na amboamboarina araka izay itiavana azy. Tsy maintsy nanaraka an’io lalàna io Andriamanitra raha te hanao ny rariny.—Salamo 37:28.
Tsy hatokisan’ny olona intsony Andriamanitra raha ohatra ka tsy nanaja ny teniny. Ho vitany ve, ohatra, ny tsy hiangatra rehefa hisafidy hoe iza amin’ny taranak’i Adama no mendrika hiaina mandrakizay? Ho azo antoka hoe hitana ny teniny ve izy ka hanatanteraka ny fampanantenany? Nanao ny rariny foana anefa izy rehefa nitady fomba hanafahana antsika amin’ny ota sy ny fahafatesana. Mahatonga antsika hatoky izany hoe mety foana ny zavatra hataony.
Lasa afaka ny hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa eto an-tany indray ny olona, rehefa nanome an’i Jesosy ho vidim-panavotana Andriamanitra. Hoy i Jesosy: “Lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana azy, fa hanana fiainana mandrakizay.” (Jaona 3:16) Tsy hoe tia rariny fotsiny àry Andriamanitra rehefa namela an’i Jesosy ho faty, fa nampiseho koa hoe tena tiany ny olombelona.
Nahoana anefa i Jesosy no tsy maintsy nijaly be vao maty, araka ny resahin’ny Filazantsara? Nanaiky hijalijaly i Jesosy sady tsy nivadika mihitsy, mba hanaporofoana fa diso ilay fiampangan’ny Devoly hoe hivadika amin’Andriamanitra ny olona rehefa ao anatin’ny sarotra. (Joba 2:4, 5) Toa marina io tenin’i Satana io, satria lavorary i Adama nefa vitany ny nitarika azy hanota. Lavorary hoatran’i Adama koa i Jesosy, nefa nankatò foana na dia nijaly aza. (1 Korintianina 15:45) Nasehon’i Jesosy tamin’izany fa tokony ho vitan’i Adama ny nankatò an’Andriamanitra, raha nisafidy ny hanao an’izany izy. Nanome modely ho antsika àry i Jesosy rehefa niaritra fijaliana. (1 Petera 2:21) Nomen’Andriamanitra valisoa izy satria nankatò foana. Lasa afaka niverina tany an-danitra izy, sady lasa tsy mety maty intsony.
Tena maty ho antsika tokoa i Jesosy, ka lasa afaka ny hiaina mandrakizay isika. Noresahin’i Jesosy hoe inona no tsy maintsy ataonao raha te hahazo an’izany ianao. Hoy izy: “Mba hahazoan’izy ireo fiainana mandrakizay, dia ilainy ny mianatra hahalala anao, ilay hany tena Andriamanitra, sy Jesosy Kristy, ilay nirahinao.”—Jaona 17:3.
Mampirisika anao ny mpamoaka an’ity gazety ity, mba hianatra momba an’i Jehovah, ilay tena Andriamanitra, sy Jesosy Kristy Zanany. Ho faly hanampy anao amin’izany ny Vavolombelon’i Jehovah eny aminareo. Azonao atao koa ny mijery ny tranonkala www.jw.org/mg.
^ feh. 8 Jereo ilay hoe “Genesisy, Bokin’ny”: “Marina ara-tantara”, ao amin’ny Fandalinana ny Soratra Masina, ao amin’ny FITEHIRIZAM-BOKIN’NY Vavolombelon’i Jehovah ao amin’ny jw.org/mg.
^ feh. 13 Nafindran’Andriamanitra tao an-kibon’i Maria ny ain’i Jesosy Zanany, ka lasa bevohoka izy. Tsy nandova ota avy tamin’i Maria anefa i Jesosy satria niaro azy ny fanahy masina.—Lioka 1:31, 35.
“Ataovy Hatrany Izao”
Niaraka tamin’ireo apostoly tsy nivadika i Jesosy ny alina talohan’ny namonoana azy, ary nasehony azy ireo hoe ahoana no hatao rehefa mahatsiaro ny nahafatesany. Hoy izy: “Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana ahy.” (Lioka 22:19) Mankatò an’izany ny Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany isan-taona, ka mahatsiaro ny nahafatesan’i Jesosy, isaky ny mitsingerina ilay daty. Nisy 19862783 no nanatrika an’izany tamin’ny herintaona.
Mitsingerina amin’ny alarobia 23 Martsa, aorian’ny filentehan’ny masoandro, ny nahafatesan’i Jesosy amin’ity taona ity. Manasa anao sy ny fianakavianao ny Vavolombelon’i Jehovah amin’io, satria hisy lahateny hanazava hoe nahoana no zava-dehibe ny nahafatesan’i Jesosy ary inona no soa ho azonao avy amin’izany. Tsy misy vidim-pidirana ilay izy sady tsy misy fanantazan-drakitra. Mba anontanio an’ireo Vavolombelon’i Jehovah eny aminareo ny toerana sy ny ora hanaovana azy io, na jereo ny www.jw.org/mg.
Tsarovy ny Nahafatesan’i Jesosy
Asainay ianao hahatsiaro an’io fotoan-dehibe io miaraka aminay. Ho hitanao any hoe nahoana no mahasoa anao ny fiainan’i Jesosy sy ny nahafatesany.
Fanomezana avy Amin’Andriamanitra ny Vidim-panavotana
Inona no atao hoe vidim-panavotana? Inona avy ny soa azonao amin’izy io?
Hizara Hizara Nahoana i Jesosy no Nijaly sy Maty?
MATOAN-DAHATSORATRA Tena Nitranga ve Izany?
MATOAN-DAHATSORATRA Nahoana i Jesosy no Nijaly sy Maty?
Mety ve ny Mivavaka any Amin’ny Toerana Masina?
Ho Voaro Ianao Raha Mailo!
Iza no Nanao An’ireo Toko sy Andininy ao Amin’ny Baiboly?
Iza moa ny Devoly?
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Nahoana i Jesosy no Nijaly sy Maty?
Raki-peo Fandikana raki-peo NY TILIKAMBO FIAMBENANA Nahoana i Jesosy no Nijaly sy Maty?
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Nahoana i Jesosy no Nijaly sy Maty?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Nahoana i Jesosy no Nijaly sy Maty?
Milaza ny Marina Momba ny Fiainan’i Jesosy ve ny Baiboly?